French Onion Soup Recipe | Couple yeMugwagwa
Kana paine dhishi rimwe Tracy uye ini ndisingakwanise kurarama ndisina, zvisinei nekuti tiri kupi, chiFrench Onion Soup. Ndiro ndiro imwe iyo, paunoda, hapana chinotsiva. Iyo inogona kunge iri French Onion Soup, kana chimwe chinhu zvachose.
Unogona sei kurondedzera? Inodziya, inonyaradza, buttery, cheesy, ine mafuta…. zvese zvaunoda mune chechokwadi nyaradzo chikafu. Ichi chikafu cheFrance ngano chave chiri chenguva yakareba, uye zvechokwadi chikafu chinofanirwa kuve nechokwadi chekuve nacho iwe uchiri kuFrance. Nekudaro, kana iwe wakaita sesu, uchigara muUS uye uchishuvira chikafu chakanyatsonaka zvisinei nekwaakabva, French Onion Soup ndiyo nzvimbo yekuenda!
1 baguette cheka muzvimedu zve1 / 2-inch
2 pounds yellow eion yakatsemurwa, yakabviswa kubva kumusoro kusvika pasi uye yakanyudzwa mu1 / 4-inch hafu-mwedzi
4 hombe nyoro nyoro mashizha
2 tablespoons canola mafuta
2 tablespoons unalted batare cheka kuita zvidiki cubes
Ichangobva pasi dema pepani
8 makapu unganidza nyama yemombe, nyama yemombe, huku yemombe kana kuti inosvuta huku yekutengesa
1 / 3 mukombe poti inogona kutsiva Madeira, sherry kana yakaoma vermouth
1 teaspoon akachekwa nyowani mashizha
2 makapu grated Gruyère chizi
2 makapu grated fontal cheese
Preheat ovheni kune 375 madhigirii.
Paradzira zvimedu zve baguette mune imwechete pane imwe pepa yekubheka uye uvabikire iyo 15 kusvika 20 maminetsi, kusvikira apepuka browned uye yakaoma.
Pisa paniji hombe yekupisa pamusoro pekupisa kwepakati kwemaminetsi akati wandei. Paradzira hanyanisi zvakaringana mupani, pamwe ne2 yemashizha e bay, uye regai vagare vasina kubatwa kwemaminetsi mashoma. Kanda iyo mafuta zvakaenzana pamusoro pavo uye dot ne bhotela. Usavamutse kwemaminitsi akati wandei. (Chinangwa ndechokubvumira humwe hweanion kunyorova uye kuti riwane imwe yakanaka onion pane anyanisi pakutanga. Ukangomutsa, mvura ichaburitswa, uye caramelizing ichaguma kusvika mvura iya yaputika.)
Kurisa hanyanisi, uchishandisa chipunu chakapetwa-chakapetwa kupururudza mabhuru ese pasi pegango. Mwaka wekuravira nemunyu uye pepper. Deredza kupisa kusvika pakati uye kurega anyezi achibika, achikurudzira kazhinji, kune 20 kusvika 25 maminetsi, kusvikira ivo vari goridhe brown uye zvakanakisa caramelized.
Chinjana hanyanisi muhari hombe uye wedzera iyo 2 yakasara bay mashizha, hanyanisi onion uye stock. Mwaka ne 1 / 2 supuni yemunyu uye 1 yehupuni pepuni. Huya nekubika pamusoro pepakati-yakanyanya kupisa, wozodzora kupisa kusvika pakati uye kurega iyo soup ichibika, isina kufukidzwa, kwemaminetsi e15, kugadzirisa hunyoro kupisa kuti irambe ichibvira kwazvo.
Isa chigaro mune yepamusoro chetatu chechoto uye preheat iyo broiler kumusoro. Tungamira pepa rakarukwa rekubheka nealuminium foil uye isa 8 onion soup crocks pairi.
Dhirowa chiteshi uye thyme mune soup inopisa, uye uite iyo mumakwande, uchimisa hafu-inch pfupi mapfupi emakamu avo. Float 2 kana 3 zvidimbu zveBaguette pamusoro: Unoda kuve neshuwa yekuvhara nechepasiripo pasipo pechingwa chisinga pevari.
Sanganisa Gruyere uye fontal chizi mune mudiki diki. Durura 1 / 2 mukombe weketi yakasanganiswa zvakaringana pamusoro pematoyi mune imwe neimwe girazi (usadonha!) Uye broil ye3 kana 4 maminetsi, kusvikira chizi ichibhururuka uye yakatsvuka. Shumirawo pakarepo.
Category: Appetizer, Europe, Food uye Drink, Furanzi, French, Recipes Tags: chikafu, Furanzi, French onion soup, recipe
← Maitiro Ekushandisa 3 Mazuva muMacau
5 Inofanirwa-Shanya Nyika Dzakanakaina Mifananidzo Mabhichi →